Waxaa la sheeciyay xiliga ay bilaabaneyso doorashada Golaha Shacabka ee Gobollada-Waqooyi – Kalfadhi
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Gobollada-Woqooyi (Soomaaliland) Khadar Xariir Xuseen, ayaa sheegay in maalmaha soo socda ay bilaabi doonaan doorashada xildhibaannada Golaha Shacabka ee ka soo jeeda Soomaaliland.
Guddoomiyaha ayaa hadalkaasi sheegay kaddib kulan Ra’iisul Wasaare Rooble uu la yeeshay guddiyada doorashooyinka Heer Federaal (FEIT) iyo SIET Soomaaliland.
“Waxaa la isla qaatay in labada isbuuc ee soo socota doorashooyinka si fiican oo hufan ay u bilowdaan. Waxaa la isla qaatay in goobtii doorashada la soo qiimeeyo odayaashii iyo ergadii soo xuli laheedna la dadejiyo iyo in kuraasta ugu horreysa ay qabsoomi doonaan labada isbuuc gudahood, la islana gartay qorshe hoowleed dhamees tiran oo ku qotama shaqa walba iyo xiligalaqaban doono”, ayuu yiri.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble, ayaa sheegay in Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka iyo kooxdiisa ay ku heshiiyeen in 17-ka bisha October 2021 ay bilaabaan diyaar-garowga doorashada Golaha Shacabka.
Mudane Rooble ayaa hadalkaasi habeen hore ka jeediyay munaasabad lagu soo dhoweynayay ergadii Soomaaliya ee kiiskii difaaca Badda oo uu hoggaaminayey Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Xukuumadda Mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar).
Xildhibaannada maamulka Jubbaland oo maanta dooran doona afar Senator